တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ အောက်လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာရေးရာကော်မတီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr.ALEXEI CHEPA ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
Coronavirus Disease 2019(Covid-19) ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အတွက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်မှ အစပြု၍ တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) အရာရှိ၊ စစ်သည်များနှင့် အရပ်သား အစားခန့်ဝန်ထမ်းများက လုပ်ခလစာငွေများမှ တတ်အားသရွေ့ ထည့်ဝင်လှူဒါန်း(ရုပ်သံသတင်း)
Coronavirus Disease 2019(Covid-19) ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အတွက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်မှ အစပြု၍ တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) အရာရှိ၊ စစ်သည်များနှင့် အရပ်သား အစားခန့်ဝန်ထမ်းများက လုပ်ခလစာငွေများမှ တတ်အားသရွေ့ ထည့်ဝင် လှူဒါန်း
Coronavirus Disease 2019(Covid-19) ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အတွက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်မှ အစပြု၍ တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) အရာရှိ၊ စစ်သည်များနှင့် အရပ်သား အစားခန့်ဝန်ထမ်းများက လုပ်ခလစာငွေများမှ တတ်အားသရွေ့ ထည့်ဝင် လှူဒါန်း(ရုပ်သံသတင်း)
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်သူများနှင့် တပ်မတော်သားများ၊ မိသားစုဝင်များအတွက် ကာကွယ်ရေး၊ ကုသရေးနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ (ရုပ်သံသတင်း)
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်သူများနှင့် တပ်မတော်သားများ၊ မိသားစုဝင်များအတွက် ကာကွယ်ရေး၊ ကုသရေးနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ(ရုပ်သံသတင်း)
တပ်မတော်သည် နိုင်ငံအတွက် အရေးကြုံပါက အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ရှိနေသည့် အခိုင်မာဆုံး Institution ဖြစ်၊ ယခု COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် ပြည်သူတို့အား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်နေရမည်၊ လိုအပ်သောဆောင် ရွက်မှုများအားလုံး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထား
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်သူများနှင့် တပ်မတော်သားများ၊ မိသားစုဝင်များအတွက် ကာကွယ်ရေး၊ ကုသရေးနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော (၇၅)နှစ်မြောက် စိန်ရတုတပ်မတော်နေ့ အထိမ်းအမှတ် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၏ သဝဏ်လွှာ၊ (၇၅)နှစ်မြောက် စိန်ရတုတပ်မတော်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ဇီဝိတဒါနဌက်လွှတ်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ(ရုပ်သံသတင်း)
(၇၅)နှစ်မြောက် စိန်ရတုတပ်မတော်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဇီဝိတဒါနငှက်လွှတ်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
ဇူလိုင် ၂၆၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ အောက်လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာရေးရာကော်မတီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr.ALEXEI CHEPA ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
ရေးသားသူ - Admin ထင်မြင်ချက် မရှိသေးပါ
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၂၆
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ အောက်လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာရေးရာကော်မတီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr.ALEXEI CHEPA ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျသညျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ၊ အောကျလှတျတျော၊ နိုငျငံတကာရေးရာကျောမတီ၏ ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ Mr.ALEXEI CHEPA ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံ တှဆေုံ့သညျ။
နပွေညျတျော၊ ဇူလိုငျ ၂၆
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Paul R. Seger အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံ၊ အောက်လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာရေးရာကော်မတီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. ALEXEI CHEPA အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်လေ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု(၇၂) နှစ်မြောက် လေယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်များ တပ်တော်ဝင် အခမ်းအနားကျင်းပ(ရုပျသံသတငျး)
ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Heuangseng KHAMDALAVONG အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
မေ ၃၀၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ နှစ်သစ်ကူးနှုတ်ခွန်းဆက်စကား (ရုပ်သံသတင်း)
ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၉ Admin 0
ပြန်စာထားခဲ့ပါ။ ပြန်စာ ပယ်ဖျက်ပါ
သင့် email လိပ်စာကို ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သော ကွက်လပ်များကို * ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဧပြီ ၈၊ ၂၀၂၀ Admin 0
Coronavirus Disease 2019(Covid-19) ရောဂါ ကာကှယျ၊ ထိနျးခြုပျ၊ ကုသရေးအတှကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ မှအစပွု၍ တပျမတျော(ကွညျး၊ ရေ၊ လေ) အရာရှိ၊ စဈသညျမြားနှငျ့ အရပျသားအစားခနျ့ဝနျထမျးမြားက လုပျခလစာငှမြေားမှ တတျအားသရှေ့ ထညျ့ဝငျလှူဒါနျး နပွေညျတျော၊ ဧပွီ ၆
ဧပြီ ၆၊ ၂၀၂၀ Admin 0
မတ် ၃၀၊ ၂၀၂၀ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပါလီမန်ဆိုင်ရာ ဒုတိယ၀န်ကြီး Mr. Iwao HORII ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
စက်တင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၇ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ဓမ္မရက္ခိတ၀န်းသိုကျောင်းတိုက်၏ ဦးစီးပဓာနနာယက နိုင်ငံတော်သြ၀ါဒါစရိယ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု အဘိဓဇအဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမဇောတိက၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တသီလ၀ံသ မဟာထေရ်မြတ်ကြီး၏ ဥတုဇရုပ်ကလာပ်တော်အား ဖူးမြော်ကြည်ညို
အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၇ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်၊ လာအို အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lt. Gen. Chansamone Chanyalath အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နိုဝင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ တပ်မတော်ဆေးရုံတွင် တက်ရောက်ကုသမှု ခံယူလျက်ရှိသည့် အရာရှိ၊ စစ်သည်များအားတွေ့ဆုံအားပေး
ဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၇ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Kan Thar Yar International Specialist Hospital ဖွင့်ပွဲတက်ရောက်ဖွင့်လှစ်
ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၇ Admin 0
ဧပြီ ၂၀၂၀ (၃)
မတ် ၂၀၂၀ (၄၇)
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၅၉)
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ (၄၁)
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ (၈၁)
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ (၄၄)
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ (၆၇)
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ (၅၉)
သြဂုတ် ၂၀၂၀ (၅၅)
ဇူလိုင် ၂၀၂၀ (၄၂)
ဇွန် ၂၀၂၀ (၄၃)
မေ ၂၀၂၀ (၃၆)
ဧပြီ ၂၀၂၀ (၇၄)
မတ် ၂၀၂၀ (၆၀)
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၅၄)
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ (၅၄)
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ (၆၉)
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ (၁၇)
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ (၂၇)
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ (၂၉)
သြဂုတ် ၂၀၂၀ (၃၅)
ဇူလိုင် ၂၀၂၀ (၃၉)
ဇွန် ၂၀၂၀ (၂၈)
မေ ၂၀၂၀ (၃၃)
ဧပြီ ၂၀၂၀ (၃၅)
မတ် ၂၀၂၀ (၅၁)
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၄၂)
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ (၄၄)
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ (၄၈)
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ (၄၁)
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ (၃၇)
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ (၂၇)
သြဂုတ် ၂၀၂၀ (၂)
မူပိုင် © ၂၀၂၀ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်.